youtube – OOTDMYANMAR
HIGHEST-PAID YOUTUBERS OF 2020, ACCORDING TO FORBES
No Comments on HIGHEST-PAID YOUTUBERS OF 2020, ACCORDING TO FORBES
Forbes မဂ္ဂဇင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ 2020 မှာ ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိထားတဲ့ YouTuber များ
Forbes has just released its annual list of highest-paid YouTube stars. Not much has changed because the list was topped by 9-year-old Ryan Kaji of Ryan’s World.
Forbes က နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်နေကျဖြစ်တဲ့ ဝင်ငွေအများဆုံး YouTuber စာရင်းကို မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေတာကတော့ Ryan’s World အရဲ့ အသက် ကိုးနှစ်အရွယ် Ryan Kaji ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိပါဘူး။
Check out the full list of Forbes’ highest-paid YouTube stars of 2020 below.
Forbes က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ 2020 ခုနှစ်ရဲ့ ဝင်ငွေအများဆုံး နာမည်ကျော် YouTuber တွေကို အောက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Translated by @Yaminn Phyo Wai
Tags forbes, jeffreestar, ootdmyanmar, youtube
NEW WATCHLIST ON OUR YOUTUBE CHANNEL
No Comments on NEW WATCHLIST ON OUR YOUTUBE CHANNEL
OOTD MYANMAR ရဲ့ YOUTUBE CHANNEL က WATCHLIST အသစ်များ
Hello, loves! How is your July coming thru
?မင်္ဂလာပါ အချစ်တို့ရေ ! ဇူလိုင်လမှာ ဘာတွေကြုံတွေ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရလဲ။ We hope you are still okay. But if you are bored, we have new videos up in our YouTube channel you can watch right now.
အချစ်တို့အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပျင်းနေတဲ့သူလေးတွေကတော့ OOTD ရဲ့ You Tube Channel က ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Video တွေကို ဒီမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
PS Please don’t forget to subscribe!
Subscribe လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Tags ootdmyanmar, youtube
6 WORKING SPACE TOUR VLOGS TO INSPIRE YOU CLEAN/UPGRADE YOUR SPACE
No Comments on6WORKING SPACE TOUR VLOGS TO INSPIRE YOU CLEAN/UPGRADE YOUR SPACE
ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်စားပွဲကို ပြောင်းလဲရာမှာ အကြံကောင်းတွေရနိုင်မယ့် WORKING SPACE Tour Vlogs6ခု
If you’re looking ways to reorganizing your desk pegs, here are some desk tour vlogs from various YouTubers to get you inspired. Make sure to get inspired depending on your taste/style.
ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်စားပွဲကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေ ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ အကြံဉာဏ်တွေ မှီငြမ်းနိုင်ဖို့ YouTuber တွေရဲ့ Desk tour vlog တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံ ၊ ကိုယ့်စတိုင် နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပုံစံကိုရွေးချယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
Tags desktour, ootdmyanmar, reviews, youtube
4 COMPILATION VIDEOS WE’ VE CREATED IN CASE YOU’VE MISSED
No Comments on4COMPILATION VIDEOS WE’ VE CREATED IN CASE YOU’VE MISSED
This COVID-19 ,Stay at home situation is just daunting. So, your OOTDMYANMAR editors are trying and creating contents to keep you sane and entertained. So, with our latest contents we’ve created TOP 10 compilations.
OOTD ရဲ့ Video တွေကို မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေအတွက် ဗီဒီယိုပေါင်းချုပ် ၄ ခု
COVID-19 ကြောင့် အိမ်မှာပဲနေရတဲ့ကာလတွေက ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကြောက်ရသလို ပျင်းစရာလည်းကောင်းပါတယ်။ OOTDMYANMAR ရဲ့ editor တွေက ပရိတ်သတ်တွေကို ဖျော်ဖြေမှုတစုံတရာပေးနိုင်ဖို့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံကို တင်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မကြာသေးခင်က ဖန်တီးထားတဲ့ TOP 10 compilation video တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာ video တွေလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင် :
PS. Please don’t forget to subscribe! =)
PS. Subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်
5 WAYS TO MAKE YOUR LOOK CHICER
No Comments on5WAYS TO MAKE YOUR LOOK CHICER
ကိုယ့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကို ပိုစတိုင်ကျသွားစေမယ့် အချက် ၅ ချက်
Want to upgrade your look? We have some suggestions:
ကိုယ့်ပုံစံကိုပြောင်းလဲပစ်ချင်နေပြီလား။ OOTD က အကြံဉာဏ်တစ်ချို့ပေးပါရစေ။
2. ORANGE + WHITE
3. LBD + COAT
4. FLARE + CROP TOP
5. PURPLE + FRINGES
Outfits: Fashion Buffet
Styled by: @joamarjohn
Produced by: @ootdmyanmar
Video ကို ဒီမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Tags Fashion, ootdmyanmar, youtube